सायद तिम्रो मेरो माया बस्यो की ? - नेपालबहस
सायद तिम्रो मेरो माया बस्यो की ?
| १०:२२:२६ मा प्रकाशित
२६ चैत, काठमाडौं । गायक गायिका प्रबिन बेडवाल अनि सीता तुम्रोक को आवाजमा रहेको ”सायद तिम्रो मेरो माया बस्यो की “ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । माया र प्रेमलाई निकै आकर्षक रुपमा गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्मला कुवर को शब्द सिर्जना तथा रमेश सुबेदीको संगीत मा सन्दीप कार्की ले एरेन्ज गरेका छन । क्यामेरा म्यान गो क्युरी नाम बाट ग्रीनिज बुक मा नाम लेख्न सफल इसक जबेगुले गरेका हुन भने ड्रोन र सम्पादन पनि उनैको रहेको छ ।
सीता अफिसियल बाट उक्त भिडियो अपलोड भएका छन भने अमृत साही ठकुरी अनि गायिका स्वायम सीता तुम्रोक को रोमान्स हेर्न सक्नु हुन्छ । गीतको भिडियोलाई हाङ्ग चेम्जोङ्गले निर्देशन गरेका छन ।
नर्भिक बन्यो नेपाल सुपरलिगको मेडिकल पार्टनर १६ घण्टा पहिले
ढुक्क हुनुस, १० महिनासम्म धान्न सक्ने गरी नुन र चिनी छ ! १ वर्ष पहिले
धानखेतमा युवतीमाथि बलात्कार, उधारो ५ लाख दिएर फेरि समाजको बलात्कार ! ६ महिना पहिले
देशकै अब्बल सीडीओ कुरुम्बाङ् अब स्याङ्जामा खटिए १ वर्ष पहिले
दिप्रुङ चुइचुम्मामा ‘एक वडा, एक दलित सहकारी संस्था’ १ वर्ष पहिले